Ọkwa Òtù Na-achị Isi Mara Banyere Ibupụ Isi Ụlọ Ọrụ Ndịàmà | Akwụkwọ Mgbaafọ nke 2014
N’abalị ise n’ọnwa Julaị afọ 2013, e nwere ọkwa Anthony Morris, bụ́ onye so n’Òtù Na-achị Isi, maara ụmụnna na-eje ozi n’isi ụlọ ọrụ anyị. Ọ sịrị: “N’abalị anọ n’ọnwa Julaị afọ 2013, e kpebiri na a ga-ere ụlọ isii anyị nwere na Bruklin. Ọ pụtara na ọnwa Ọgọst gbaa ọkara, anyị akwapụ n’ise n’ime ha ka e nwee ike ire ha.” Ọkwa a mere ụmụnna anyị obi ụtọ.
Ebe a na-asa ákwà n’isi ụlọ ọrụ anyị dị n’ụlọ nke atọ. Nwanna Morris kwuru na ha ka ga na-asa ákwà ebe ahụ ruo ihe dị ka ọnwa Julaị afọ 2014. O kwukwara na mgbe ha ga-akwapụ n’ụlọ nke isii nwere ike ịbụ n’afọ 2017.
Ihe mere e ji ere ụlọ isii ndị ahụ bụ na a chọrọ iburu isi ụlọ ọrụ anyị dị na Niu Yọk Siti gaa Wọwik. Ala ebe ahụ dị otu narị hekta na abụọ. Ma, e nweghị ihe a ga-eme n’ala ahụ ma ọ bụrụ na e bughị ụzọ nata ndị ọchịchị ikike.
N’ihi ya, ụmụnna nọ na Betel dị n’Amerịka tọrọ ntị n’ala mgbe Mark Sanderson, onye sokwa n’Òtù Na-achị Isi, mara ọkwa ọzọ n’abalị iri na asatọ n’ọnwa Julaị. Ọ sịrị: “Obi dị anyị ụtọ ịgwa unu na ná mgbede ụnyaahụ, ọfis na-ahụ maka ịrụ ụlọ na Wọwik kwetara ka anyị rụọ isi ụlọ ọrụ anyị otú anyị si see ya n’akwụkwọ. Ihe fọziri bụ ka ndị ọchịchị nye anyị ikike ka anyị malite ịrụ ya. Anyị chetara na ọ bụ ụnyaahụ ka o mere afọ anọ anyị zụrụ ala ahụ dị na Wọwik. Obi ụtọ anyị bụ na ihe ndị na-eme kemgbe ụbọchị ndị a na-egosi anyị na Jehova na-agọzi mbọ niile anyị na-agba.” Nwanna Sanderson jikwa ohere ahụ kelee ụmụnna na-arụ ọrụ n’isi ụlọ ọrụ anyị maka mbọ ha gbarala gbasara ala ahụ nakwa ekpere niile ha na-ekpe banyere ya. Ọ sịrị: “Nke kachasịnụ bụ na anyị na-ekele Jehova maka otú o si enyere anyị aka n’atụmatụ anyị na-eme ibu isi ụlọ ọrụ anyị gaa Wọwik dị na Niu Yọk.”
N’abalị iri abụọ na isii n’ọnwa Julaị afọ 2013, Nwanna Morris na ụfọdụ ndị Betel na ụmụnna ndị na-enye aka ma a chọọ ịrụ Ụlọ Nzukọ Alaeze nwere nnọkọ n’ebe ọhụrụ a na-anọ eri nri na Tọksido dị na Niu Yọk. Ụmụnna ndị ahụ ya na ha nwere nnọkọ ahụ dị ihe dị ka otu puku. Ọ bụ ebe ahụ ka ha ga-esi na-aga ọrụ na Wọwik. Mgbe ọ gbachara ha ume, ọ gwara ha na e nwere ọkwa ọ chọrọ ịma. Nwanna Morris sịrị: “E nwere akwụkwọ ozi e nyere m ugbu a, m chọkwara ịgwa unu ihe dị na ya. Ndị ọchịchị enyela anyị ikike ka anyị rụwa ụlọ anyị.” Tupu ọ gụchaa ihe dị n’akwụkwọ ozi ahụ, ụmụnna malitere kụwa aka. Obi dị ụmụnna ndị ahụ niile ụtọ mgbe Nwanna Morris gụchara akwụkwọ ozi ahụ ndị ọchịchị detara n’ihe dị ka awa atọ.
Olee Ihe Ndị Na-eme na Wọlkil, Tọksido, na Wọwik?
A malitere ịrụnyekwu ụfọdụ ihe n’ụlọ ọrụ anyị dị na Wọlkil n’ọnwa Ọgọst 2009. Kemgbe ahụ, ihe dị ka puku ụmụnna abụọ na narị asatọ abịala rụọ ọrụ ebe ahụ. Ụlọ ndị a chọrọ ịrụ bụ ebe ọhụrụ a ga-ebi ebi, ebe a ga na-adọwa ụgbọala na ọfis ọhụrụ. A na-arụgharị otu ebe obibi, na-edozigharị ma ebe a na-anọ ebi akwụkwọ, ma ebe a na-asa ákwà, na ụlọ ndị ọzọ. A na-atụ anya na a ga-arụgharịcha ihe ndị a ná ngwụcha afọ 2015.
Ka a na-arụ nke Wọlkil, a malitere ọrụ n’ebe a chọrọ ibuga isi ụlọ ọrụ anyị na Wọwik. Ihe mbụ a malitere ime bụ ịsụ ọhịa, ịrụ ụzọ, na ili waya na paịpụ n’ala. Ná ngwụcha afọ 2013, a malitere ịrụ ụlọ atọ mbụ ha ga-arụ, ya bụ, ebe a na-edozi ụgbọala, ebe ndị ọbịa ga na-adọwa ụgbọala ha, nakwa ebe a na-edozi ihe ndị mebiri emebi. Ihe mere ụlọ atọ a ji dị mkpa bụ na a ga-anọ na ha na-edozi ma ụgbọala ma ihe ndị ọzọ e ga-eji na-arụ ọrụ, ha ga-abakwa uru ma a rụchaa ọrụ ahụ niile. A rụchaa ha atọ, a rụwazie ebe obibi na ọfis dị iche iche. A na-atụ anya ibido ha ma a banye afọ 2014.
Otu nwanna aha ya bụ Kenneth Chernish so ná ndị na-ahụ maka ọrụ a. O kwuru na Tọksido bụ ebe a ga-adọwa ihe ndị a ga-eji na-arụ ọrụ na Wọwik. Ala anyị dị na Tọksido dị iri hekta abụọ, isi ya gaa Wọwik dị ihe dị ka kilomita iri. Nwanna ahụ kwukwara na ọ bụ ebe ahụ ka ụmụnna ndị bịara ọrụ ga-ebi. A họọrọ ụfọdụ ụmụnna ndị na-enye aka ma a chọọ ịrụ Ụlọ Nzukọ Alaeze n’ebe ọwụwa anyanwụ Amerịka ka ha soro na-arụ ụfọdụ ọrụ ka o wee na-aga aga.
Ọtụtụ ụmụnna ndị so ná ndị na-enye aka ma a chọọ ịrụ Ụlọ Nzukọ Alaeze n’Amerịka na-atụsi anya ike mgbe a ga-akpọ ha ka ha soro rụọ isi ụlọ ọrụ ọhụrụ anyị a. Ụmụnna ndị nwere aka ọrụ dị iche iche na-abịa ọrụ ebe ahụ, na-alakwa. Otu nwanna nwaanyị aha ya bụ Leslie Blondeau na di ya, bụ́ Peter, so bịa ọrụ a. Ha so ná ndị na-eli paịpụ mmiri. Ọ sịrị, “Ọrụ a mụ na di m na-arụ na-eme ka anyị hụkwuo ibe anyị n’anya. E nwekwara ọtụtụ ihe anyị na-agaghị echefu echefu.”
Otu nwanna nwaanyị ọzọ aha ya bụ Mallory Rushmore, sịrị, “M so awaya ọkụ na Tọksido. Kwa ụbọchị, obi na-atọ m ezigbo ụtọ ma m hụ otú ụmụnna niile bịara ọrụ a si arụkọ ọrụ ọnụ.”
Otu nwanna ọzọ aha ya bụ Quincy Dotson sịrị: “O nweghị ihe dị ka mmadụ iso na-arụ ọrụ a. Echere m na m ga na-arụgbu onwe m n’ọrụ, ma nke bụ́ eziokwu bụ na m na-amụta ọtụtụ ihe.”
Nwanna Chernish kwuru na ọrụ a na-atọgbu ya atọgbu. O kwukwara na ụmụnna na-arụ ọrụ ọ bụla e nyere ha nke ọma nakwa na ha anaghị eme anya ụra. Obi na-adịkwa ha ụtọ n’agbanyeghị ọrụ ha na-arụ.